စည်​ပင်​ဝန်​ထမ်း​လေးတစ်​​ယောက်​ရဲ့ရိုးသားမှုကိုဂုဏ်​ပြုစကားဆိုလိုက်​တဲ့ ဟက်​ကက် – Myanmar Magazine
October 13, 2018 myanmarmagazine	အနုပညာသတင်း
တစ်​​ခေတ်​တစ်​ခါတုန်းက ​နှုတ်​ခမ်းနီမ​လေး​တွေရဲ့ အသည်းစွဲ ဟက်​ကက်​ကို ပရိသတ်​ကြီး သတိရကြဦးမှာ​ပေါ့။ သီချင်း MTV တိုင်းလိုလိုမှာ ဆံပင်​အလယ်​ခွဲ​လေးနဲ့ သရုပ်​​ဆောင်​တဲ့ ​ကောင်​​လေးတစ်​​ယောက်​ကို ပရိသတ်​​တွေက လက်​ခံအား​ပေး သ​ဘောကျကြပါတယ်​။ ဟက်​ကက်​တို့ ဖြိုး​ငွေစိုးတို့ဟာ သီချင်း MTV ​တွေရဲ့ ပင်​တိုင်​စံမင်းသား​တွေလို့ ဆိုရ​လောက်​​အောင်​ အင်​မတန်​လူကြိုက်​များလှပါတယ်​။ဟက်​ကက်​ဟာ သရုပ်​​ဆောင်​​ကောင်းရုံသာမကပဲ သီချင်းဆို​ကောင်းသူတစ်​ဦးလဲဖြစ်​ပါတယ်​။ ဟက်​ကက်​ရဲ့ “ချစ်​သူ” ဆိုတဲ့ သီချင်းကလဲ ချစ်​သူ​စုံတွဲ​တွေကြားထဲမှာ ​အလွန်​​ရေပန်းစားပြီး ​အောင်​မြင်​လှပါတယ်​။ဟက်​ကက်​ဟာ အခုဆိုရင်​ အနုပညာအလုပ်​​တွေနဲ့ အနည်းငယ်​အလှမ်း​ဝေးသွားခဲ့ပြီဖြစ်​ပြီး သူ့ရဲ့ဘဝကို ရိုးရှင်းစွာဖြတ်​သန်း​နေထိုင်​လျက်​ရှိပါတယ်​။
ဒီ​နေ့မှာ​တော့ ဟက်​ကက်​ဟာ သူ့ရဲ့​ဖေ့စ်​ဘုတ်​စာမျက်​နှာမှာ ရိုးသားလှတဲ့ စည်​ပင်​သာယာဝန်​ထမ်း​လေးတစ်​ဦးက ချီးကျူးစကား​လေးဆိုထားပါတယ်​။ ” ” ကျွန်တော် တို့ ခင်ဗျားတို့ ဒီခလေးမ လေးလောက် ရိုးသား ရဲကြရဲ့လား?ဒီမနက် အိပ်ရထ လုပ်စရာ ကိစ္စလေးတွေ အတွက် အပြင်ထွက် ဖို့ ကားပေါ်တက်တော့ ကား ညာဖက်ထောင့်မှာ ပွတ်တိုက်ချစ်ရာ တစ်ခုတွေ့တော့ အော် ငါ ညက ထီဖောက်ပြီပေါ့ ! အေးပေါ့ ! တိုက်ရှေ့ လမ်းပေါ်ရပ်တော့လဲ ဒီလောက်တော့ ရှိမှာပေါ့လေနော်! ထားလိုက်ပါ ! ညနေဘက် အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ! အိမ်နားက လုံခြုံရေးက အစ်ကိုကို စည်ပင်က ညီမလေးတစ်ယောက် လာရှာတယ်တဲ့ ! ဘာက်စ္စလဲ ဆိုတော့ သူလဲမသိဘူးတဲ့ ! ဒီကားပိုင်ရှင်ကို လာရှာတာပါတဲ့ !အိုခေ – ကားထိုး , အိမ်ပေါ်တက် , ရေမိုးချိုးပြီး အခွေလေး ကြည့်နေတုန်း တံခါးခေါက်သံ ကြားလို့ (၈:၄၀)ထအဖွင့် ကျွန်တော်တို့ တိုက်ကလုံခြုံရေးရယ် စည်ပင် အဝတ်အစား ဝတ်ထားတဲ့ ညီမလေးတစ်ယောက်ရယ် !သမီးညက လမ်းပေါ်က ပစ္စည်းတွေ ( ကျွန်တော်တို့ ခင်ဗျားတို့ ပစ်ချထားတဲ့ ) လိုက်ကောက်သိမ်းနေတုန်း ပစ္စည်းသယ်တဲ့ လှည်းကို ခဲခု ထားပေမယ့်​ ပစ္စည်းတွေ လေးပြီး မထိန်းနိုင်ပဲ လှည်းက လိမ့်သွားတာ အစ်ကိုကားကို တိုက်မိလိုက်တယ် ! အဲဒီ အတွက် တောင်းပန်ဖို့ ဒီမနက်တစ်ခေါက် လာတယ် ! မတွေ့ဘူး ! ညနေက လဲ လာသေးတယ် ! မတွေ့ခဲ့ ပြန်ဘူး !အခုမှ အစ်ကို နဲ့တွေ့ပြီး လာတောင်းပန်တာပါ လို့ မျက်ရည်လေးဝဲဝဲ​လေးနဲ့ ပြောရှာတယ်​။ ဟာ ! ညီမလေး အခုလို လာတောင်းပန်တာကိုက အစ်ကိုက ကျေးဇူးတင်ရမှာပါ။ ဘယ်သူ့မှမသိလိုက်တဲ့ ကိုယ်လုပ်လိုက်မိတဲ့ အမှားတစ်ခုကို အခုလို မတွေ့တွေ့အောင်​ရှာပြီး အကြိမ်ကြိမ်တောင်းပန်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့ ညီမလေး စိတ်ဓါတ်ကို လေးစားတယ်။ အိမ်ကို ကောင်းကောင်း ပြန်နော် လို့ ပြောလိုက်တယ်။ ကျွန်တော် တို့ ခင်ဗျား တို့ ဒီ ခလေးမ လေးလောက် ရိုးသား ရဲကြရဲ့လား.?ဒီ ခလေးမလေး ရဲ့ စိတ်ဓါတ်ကို ဂုဏ်ယူတယ်” ဆိုပြီး ဂုဏ်​ပြုစကား​လေးဆိုထားပါတယ်​။
သူ့ရဲ့ကား ထိခိုက်​ပျက်​ဆီး​ပေမယ့်​ ရိုးသားလွန်းလှတဲ့ အမျိုးသမီး​လေးရဲ့ လုပ်​ရပ်​​ကြောင့်​ ဟက်​ကက်​တစ်​​ယောက်​ ​ကျေနပ်​သွားခဲ့ပါတယ်​။အဲ့အမျိုးသမီး​လေးရဲ့ စိတ်​ထား​လေးက အင်​မတန်​ဖြူစင်​ပြီး သူလုပ်​ခဲ့တဲလုပ်​ရပ်​အတွက်​ အမှားကိုသိပြီး ​ရှောင်​မ​ပြေးပဲ ဝန်​ခံရဲတဲ့စိတ်​ဓာတ်​က အင်​မတန်​​လေးစားစရာပါပဲ။ ပရိသတ်​ကြီးလဲ ဒီပိုစ့်​​လေးကို သ​ဘောကျရင်​ Like & share လုပ်​ဖို့​မ​မေ့ပါနဲ့​နော်​။ အချိန်​​ပေးပြီး ဖတ်​ရှု​ပေးတဲ့ပရိသတ်​ကြီးကို ​ကျေးဇူးအထူးတင်​ရှိပါတယ်​။
Source: ဟက်​ကက်​’s fb
← ပ​ထွေးဖြစ်သူမှ မယားပါသမီးကို အဓမ္မကျင့်​မှု ရပ်ကွက်လူကြီးများနဲ့ ပက်ပင်းမိ !!!
အနုပညာမလုပ်ခင် စားဝတ်နေရေးအတွက် လုပ်ခဲ့ရတဲ့ အလုပ်အကြောင်း ပြောပြလိုက်တဲ့ အေးမြတ်သူ →
ကျမနဲ့လုံးဝမသက်ဆိုင်တော့လို့ ခိုးစားနေတဲ့ လင်မယားကိုမေးလိုက်ကြပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံလိုက်တဲ့ သင်းသင်း
January 14, 2019 myanmarmagazine Comments Off on ကျမနဲ့လုံးဝမသက်ဆိုင်တော့လို့ ခိုးစားနေတဲ့ လင်မယားကိုမေးလိုက်ကြပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံလိုက်တဲ့ သင်းသင်း
November 25, 2018 myanmarmagazine Comments Off on ဖခင်ကို တချိန်က နာမည်ကြီးမင်းသားမှန်း သမီးဖြစ်သူက မသိဘူးဆိုတဲ့ လင်းဇာနည်ဇော်
ပရိသတ်တွေကို အသည်းကွဲအောင်လုပ်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ အလင်းရောင်နဲ့ မေ
September 16, 2018 myanmarmagazine Comments Off on ပရိသတ်တွေကို အသည်းကွဲအောင်လုပ်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ အလင်းရောင်နဲ့ မေ